Tarika Caspary: toetra, fiasa ary lanjany | Fanavaozana maintso
Portillo Alemanina | 21/04/2021 12:31 | Tontolo_iainana
Eo amin'ny sehatry ny biolojia sela sy ny botani dia betsaka ny miresaka momba ny tarika caspary sy ny maha-zava-dehibe azy. Izy io dia fanamafisana ny rindrin'ny sela izay mitana andraikitra lehibe amin'ny vatan'ny zavamaniry sy ny ahidrano sasany. Fantatsika fa ny rindrin'ny sela dia misy lignin sy subérin ary manampy amin'ny fiarovana ny zavamaniry izy io. Ny tarika Caspary dia miforona miaraka amin'ny rindrin'ny sela voalohany ao amin'ny fotony voalohany ary avy eo dia misy lanjany lehibe amin'ny fampandrosoana ny zavamaniry.
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao izay rehetra ilainao ho fantatra momba ny fananganana sy ny maha-zava-dehibe ny tarika Caspary.
2 Asan'ny tarika Caspary
3 Tarika Caspary sy fitaterana rano
3.1 Làlana Apoplast
3.2 Làlana fangorahana
Fantatsika fa ny endodermis an'ny rindrin'ny sela dia manana hateviny, hamafin'ny fanoherana, izay miaro amin'ny sela ny zavamaniry. Ny hatevin'ny rindrin'ny sela radial sy transverse dia vokatry ny polymers voajanahary fantatra amin'ny anarana hoe Caspary band. Izy io dia mitana andraikitra lehibe amin'ny vatan'ny zavamaniry sy ny ahidrano. Misy fantsom-pifandraisana isaky ny sela miditra amin'ny zavatra voajanahary na polymers ary manamarika ny tsy fitoviana lehibe eo amin'ny rindrin'ny sela.
Ny tarika Caspary dia manitatra ny rindrina rehetra amin'ny fomba tsy miato. Izany hoe, tsy miseho miaraka amin'ny sela rehetra ao amin'ny endodermis izany. Ny anarany dia avy amin'ny famokarana karazana sosona tsy tantera-drano izay vokariny. Izay manomboka amin'ny fametrahana ny singa phenolic sy matavy amin'ny rindrin'ny radialan'ny sela amin'ny farany dia lasa fehikibo izay manatevin-daharana ny membrane plasma hampitombo ny hateviny. Azontsika atao ny mandinika ny tarika Caspary amin'ny alàlan'ny mikraoskaopy amin'ny fampiasana loko biolojika antsoina hoe Safranin. Ity tarika ity dia azo lazaina ho fehikibo izay ampidirina ao anaty rindrina voalohany.
Asan'ny tarika Caspary
Andao hojerentsika hoe inona ny asan'ny tarika Caspary. Ny subérérera no tena ahitana azy ary mandrafitra rafitra mifandimby izay manakana ny zavamaniry sy ny tontolo iainana. Fantatsika fa mila fiarovana manokana ny zavamaniry tsy simbain'ny agents voajanahary misy eo amin'ny tontolo iainana. Ankoatr'izay, ny iray amin'ireo asany dia ny miditra an-tsehatra amin'ny fitaterana rano sy ion amin'ny alàlan'ny apoplast ny faka. Izy io koa dia manakana ireo zavatra tsy hikoriana amin'ny alàlan'ity fitaovana ity ary manery ny fitaterana intermembrane amin'ny fomba tsotra.
Ny suberin dia voaforon'ny hydroxy, epoxy, ary dicarboxylic asidra matavy. Ireo asidra matavy ireo dia mameno ny haben'ny ampahany ivelan'ny sela amin'ny sisin'ny sela zavamaniry. Izany hoe, manakana ny lalan'ny akora manelanelana ny rindrin'ny endodermis ary ny ranoka avy amin'ny tany dia miafara amin'ny fandalovana ny cytoplasm. Amin'izany fomba izany dia mamboarina permeability mifantina mahaliana kokoa ho an'ny zavamaniry. Izany no ahafahan'ny zavamaniry mifehy ny fikorianan'ny ion, mifehy ny fidiran'ny rano sy akora mineraly hafa.
Raha mankany amin'ny endodermis an'ny sela isika dia afaka mahita fa io no sela tokana manakana ny fivezivezena akora avy amin'ny tany mankany amin'ireo fako. Ny endodermis dia rakotry ny korteks ary na dia mora miparitaka eo anelanelan'ny rhizodermis sy ny vatan-tsolika aza ny iôna, dia tsy afaka miditra amin'ilay farany. Noho io antony io, ny làlana dia ny syplastan'ny zavamaniry na ny cytoplasm an'ny épermermis.
Tarika Caspary sy fitaterana rano
Amin'ny ankabeazan'ny zavamaniry, ny rano dia niditra tao amin'ny fakany ho azy. Tsy ilaina ny manana fandaniam-bola fanampiny hidiran'ny rano amin'ny fakany. Na izany aza, ny hetsiky ny rano amin'ny alàlan'ny crust sy ny sosona anatiny manontolo dia mampiasa angovo bebe kokoa ary mandalo dingana maro. Ny fihodinan'ny rano mankany amin'ny xylem dia mety hitranga amin'ny fomba roa: ny apoplast sy ny syplast. Ny andiany Caspary dia eo amin'izy roa. Handinika lalina isika hoe iza amin'ireo lalana roa ireo no ahitana ny tarika Caspary:
Io no faritry ny zavamaniry izay tsy zakan'ny protoplast. Ao amin'izy ireo no misy habaka banga hita eo anelanelan'ny rindrin'ny sela sy eo anelanelan'ny sela samihafa. Ny apoplast dia iray amin'ireo faritra miditra amin'ny rano sy ireo akora hafa izay tafiditra ao anaty ny zavamaniry. Ity làlana ity dia lakan-drano ho an'ny dioksidan'ny karbônika mankany amin'ny chloroplast. handray anjara amin'ny fametahana ny karbaona mandritra ny fizotran'ny fotosintesis. Izy ireo koa dia miditra an-tsehatra aorian'ny fanoherana ny zavamaniry amin'ny zavamiaina fitopathogenika isan-karazany izay afaka manasongadina ny metabolisma sela.
Tokony ho raisina fa ny elanelana misy eo amin'ny rindrin'ny sela sy eo anelanelan'ny sela dia feno polymères organika izay matavy ny tena toetrany. Ireto polymère biolojika ireto no mahaforona ny tarika Caspary ary misoroka ny fanaparitahana rano sy ion. Ny fitaterana ireo singa ireo amin'ny alàlan'ny apoplast dia tsy misy dikany, ambany lavitra noho izay mitranga amin'ny làlan'ny fangorahana.
Ny fanamafisana ny endodermis dia midika fa ny syplast ihany no zotra fitaterana. Eto no misy rano mandalo amin'ny membranos cytoplasmic sy protoplasts of cells. Izy io dia raisina ho toy ny fitaterana mavitrika indrindra ary Izy io dia mivezivezy avy amin'ny sela mankany amin'ny sela iray, amin'ny alàlan'ny fanavahana ny mety ho rano. Hitanay fa nanana apoplast izy, manana fihetsiketsehana rano amin'ny alàlan'ny herin'ny hatsembohana. Izany dia mitranga indrindra aorian'ny fahaverezan'ny rano amin'ny alàlan'ny fanokafana ny stomata.
Ny syplast dia ireo protoplasts mifandraika izay manome ny cytoplasm an'ny sela. Mandritra izany fotoana izany dia hitantsika fa mifandray amin'ny plasmodesmata izy ireo. Amin'ny alalany no mikoriana mora foana ny rano ary koa ny molekiola sy lanjan'ny molekiola ambany.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny tarika Caspary sy ny maha-zava-dehibe ny zavamaniry.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Tontolo_iainana » Tarika Caspary